Ilaina fitiliana an-tserasera | Martech Zone
Noho izany dia naparitakao tamin'ny farany ny tetikady rehetra momba ny varotra an-tserasera ary tafiditra sy miasa tsara izy ireo. Afaka mandrefy sy mahita ny fiantraikan'ny tetikady tsirairay tsy miankina ianao… izao no fotoana hanombohana ny fitsapana. Aiza no manomboka?
From KISSmetrics: Ny fantsom-pivarotana voaorina tsara dia tsy feno mihitsy raha tsy efa nosedraina sy namboarina ny faritra rehetra. Mba hahombiazana faran'izay betsaka, ny mpivarotra dia tokony handavaka lalina sy hanandrana amin'ny teboka fifandraisan'ny mpanjifa. Ity manaraka ity dia torolàlana fohy izay manoritra izay zavatra tsara hizaha toetra sy fanatsarana matetika - ao anatin'izany ny PPC, ny haino aman-jery, ny pejy fandraisana ary ny fampielezana mailaka. Tsy mila mitsapa ny zava-drehetra indray mandeha ianao. Atombohy amin'ny hetsika ara-barotra izay mamokatra fiverenana avo indrindra ary avy eo miasa ambany.
Tags: ab testingfanavaozana fiovam-pofitsapana mailakafitsapana endrikakissmetricsfitsapana ny pejyfitsapana amin'ny Internetmandoa isaky ny kitihotandroka fivarotanamisoratra anarana endrikafitiliana